April 2016 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကော်ဖီနဲ့ ၀ိုင်တွေဟာ အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်
နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ မှီဝဲနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေဟာ အူတွင်းးမှာရှိတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေကို အကူအညီိဖြစ်စေတာရှိသလို ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ လေ့လာချက်အသစ်တွေက အကြံပေးထားပါတယ်။
သစ်သီးဝလံတွေ၊ အသီးအရွက်တွေ၊ ကော်ဖီ၊ လဘက်ရည်၊ ၀ိုင်၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ နို့ထောပတ်တွေက အူတွင်းရှိ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများစွာကို ပေါက်ဖွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီပိုးမွှားတွေက ဖျားနာမှုတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့ အကူအညီပေးနိုင်တယ်လို့ သုတေသီ Dr.Jingyuan Fu က ရှင်းလင်းပြောပြထားပါတယ်။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့ အူတွင်းမှာရှိတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေကို လျော့နည်းစေနိုင်တာကို Fu နဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ရပါသတဲ့။ အဆီဓါတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်တဲ့ နွားနို့တွေနဲ့ ဆိုဒါအချိုရည်တွေမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေများစွာ ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှု အသစ်တစ်ခု အရ ဘီယာ သောက်ခြင်း ဟာ သင့်ကို ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေသလို ကိုလက်စထရော ပမာဏ ကိုလည်း လျော့ကျစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Oregon ပြည်နယ် တက္ကသိုလ် မှာရှိတဲ့ သုတေသီတွေဟာ ဘီယာမှာ ပါဝင်တဲ့ Xanthohumol ဆိုတဲ့ သဘာဝ ထွက် ပါဝင် ပစ္စည်း တစ်မျိုးကို ကြွက် တွေနဲ့ စမ်းသပ် တိုက်ကျွေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ကြွက် တစ်ကောင်ချင်းဆီကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့  ကီလိုဂရမ် တစ်ခုချင်းဆီနဲ့ Xanthohumol ၃၀ မှ ၆၀ မီလီဂရမ် အထိ ၃ လခန့် တိုက်ကျွေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရလဒ် အနေနဲ့ကတော့ Xanthohumol အများဆုံး တိုက်ကျွေးခံခဲ့ရတဲ့ ကြွက်တွေမှာ သိပ်သည်းမှုနည်းပါးတဲ့ လီပိုပရိုတင်း ကိုလက်စထရောတွေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ လျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထိုကြွက်တွေရဲ့  အင်ဆူလင် ပမာဏလည်း ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့နည်းသွားပြီး Xanthohumol မတိုက်ကျွေးထားတဲ့ ကြွက်တွေ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတော့ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသွားတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Xanthohumol ဟာ ကင်ဆာ ရောဂါ ကိုပါ တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိနေတာပါပဲ။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကို အခြေခံပြီး သုတေသီတွေဟာ လူသားတွေအတွက် Xanthohumol ကို အသုံးပြုပြီး ဘီယာ မဟုတ်တဲ့ စားသောက်ကုန် တစ်ခုကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖို့လည်း ကြိုးစားနေကြပါပြီ။
ဆေးဖက်ဝင် ဣဿရမူလီ အကြောင်းသိကောင်းစရာ....
ဘီပိုး စီပိုး ကင်ဆာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း အသည်းခြောက် ရောဂါတွေဟာ ကမ္ဘာ့လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ရောဂါဆိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေကြောင့် နှစ်စဉ်သန်းချီပြီး လူ့အသက်တွေဆုံးရှုံးနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် ၅ နှစ်ခန့်က စာရေးသူက “ဘီပိုးနိုင်တဲ့ဆေး” ဆိုပြီး အင်တာနက်မှာ တင်ထားခဲ့ဖူးတယ်။ ဘီပိုးရောဂါဝေဒနာရှင် ဒေါ်နန်းဖိန်းအောင် အကြောင်းပါ။ သူမမှာ ဘီပိုး၊ စီပိုးလည်း ရှိတယ်။ နောက်ပြီးအမျိုးသမီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ (သားအိမ်နဲ့နို့) အကြိတ် ကင်ဆာလည်းဖြစ်သေးတယ်။ သူမစိတ်ဓါတ်ကျပြီး မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်ဖြစ်နေချိန် မန္တလေး၊ စက်မှုနေ နန်းမွေဖောင်ရဲ့ ဖခင် ဦးအိုက်ရီနဲ့တွေ့ပြီး အနာရှိလျင် ဆေးရှိကြောင်း အမျိုးဖြစ်တဲ့ လားရှိုး ရပ်ကွက် ၆ နေ ဒေါ်ရွှေကျောင်းအိမ်မှာ သွားနေစေကာ ဣဿရမူလီရွက်ကို နေ့တိုင်း တစ်နေ့ သုံးလေးရွက်လောက် အစိမ်းလိုက် ဝါးစားခိုင်းတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်နှစ် ဆေးသွားစစ်ကြည့်တော့ ဘီပိုး စီပိုးနဲ့ သူမရဲ့ အကြိတ်ကင်ဆာလည်း လုံးဝပျောက်သွားတာတွေ့ရတယ်။ အခုတိုင် သူမက ဝဝဖြိုးဖြိုးကျန်းကျန်းမာမာ ပြုံးပြုံးရွှင်ပဲ။ ယခုသူမ (၃၇ လမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ ရန်ကုန်)နေပါတယ်။
ဣဿရမူလီဟာ ဘီပိုးစီပိုးအပြင် ကင်ဆာပိုး၊ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကိုလည်း ကောင်းစွာတားဆီး သုတ်သင်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လူ့အသည်းကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ဘီပိုးစီပိုးကို ဒီဣဿရမူလီက ကောင်းစွာ တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသွားဖို့ ဆေးစစ်မအောင်တဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေ တချို့ဘီပိုးကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပျက်ခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဣဿရမူလီကို မှီဝဲပြီး ဆေးပြန်စစ်တဲ့အခါ ဘီပိုး ကင်းစင်ပြီး နိုင်ငံခြား ပညာသင်သွားရတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။
စီပိုးရှိတဲ့ စာရေးသူရဲ့ အသိတစ်ယောက်က ကုဖို့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆေးသွားထိုးတယ်။ စီပိုးဆေးက အားပြင်းလွန်းလို့ ဆံပင်တွေတောင် ကျွတ်တယ်။ လူလည်း အတော်ကို နှုန်းချိတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆေးဖိုးကလည်း သိန်း ၂၀/၃၀ မကကုန်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါတောင်မှ ရောဂါပျောက်မပျောက် မသေချာသေးဘူး။ အချိန်လည်း ခန့်မှန်းလို့ မရသေးဘူး။
ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် မကုန်သင့်တာတွေ မကုန်အောင် မဆုံးရှုံးသင့်တာတွေ မဆုံးရှုံးအောင် ဣဿရမူလီ စတဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျနည်းတဲ့ အစွမ်းထက် တိုင်းရင်းဆေးအကြောင်းကို သိထားသင့်ပါတယ်။
ဣဿရမူလီအကြောင်းလည်း အခု လူသိများလာတယ်။ အစွမ်းထက်တဲ့ ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ကြောင်း လည်း ထင်ရှားလာတယ်။ “ဣဿရမူလီနွယ်ပင် နှင့် ကင်ဆာဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေုး” စာအုပ်ကြောင့်လည်း ဆေးရဲ့အာနိသင်ကို လူသိများစေပြီး ဆရာစောငုဝါလည်း စေတနာအပြည့်နဲ့ လူနာတွေကို ကူညီနေတာကြားသိရလို့ စာရေးသူ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဆေးပင်ရရှိနိုင်တဲ့ နေရာတွေကိုလည်း ညွှန်ပြထားပါတယ်။ စောငုဝါ (ပျဉ်းမနား) ရေးသားတဲ့ ဣဿရမူလီအကြောင်း သိကောင်းစရာ အနှစ်ချုပ်ကိုိ ကောက်နှုတ်တင်ပြလိုပါတယ်။
အရွက် လက် (၂) လုံးခန့်ကို စတင်ဝါးစား၍ ရေသောက်ရ၏။ အဆင်ပြေက တိုး၍ ၀ါးစားနိုင်၏။ ရောဂါဝေဒနာပေါ် လိုက်၍ နံနက်၊ ည တစ်ကြိမ်စီ တစ်နေ့ (၃) ကြိမ် ၀ါးစားပြီး ရေသောက်ရ၏။ အရွက်အစို လတ်ဆတ်ပါက ပိုကောင်း၏။ စစ်မှန်က ပဉ္စငါးပါးလုံး ဆေးဖက်ဝင်၏။ ပဉ္စငါးပါးလုံး အနံ့အရသာ ဆေးဖက်ဝင်မှု တူညီ၏။
- ဣဿရမူလီကို ရေရှည်သုံးစွဲသူများ ၎င်း၏ အခိုးသတ်ရန် နှမ်းလှော်စားပေးရ၏။
နှမ်းပျစ်မုန့်များ စားပေးရ၏။ အဆင်ပြေလျှင် ရေချိုးပေးရ၏။
Facebook မှ ပေးပို့သူ Kyaw Myint Myat Thein ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
တီဗီတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာက လွဲရင် အမျိုးသမီးအများစုဟာ နှစ်ဦးသာ ချစ်တင်းနှောနေချိန်အတွင်းမှာ အမျိုးသားတွေလို ပြီးမြောက်ကျေနပ်မှု မရရှိကြတာ များပါတယ်။ဒါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှု ပုံစံကိုပဲ အပြစ်တင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်နဲ့ သက်သေသာဓကအသစ်တွေက ပြောပြထားပါတယ်။
ချစ်တင်းနှောနေစဉ်မှာ ပြီးမြောက်ကျေနပ်မှုအတွက် အဓိကကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Clitoris ဟာ ယောနိလမ်းကြောင်းကနေ ဝေးသွားတတ်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ရှင်းပြထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ယောနိလမ်းကြောင်းနဲ့ Clitoris အကြားဝေးကွာမှု ပိုများတဲ့အခါ သဘာဝနည်းလမ်းအတိုင်း ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါ Clitoris ကို ပွတ်တိုက်လှုံ့ဆော်ပေးလေ့ အရှိတာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ ချစ်တင်းနှောနေစဉ်အတွင်း ပြီးမြောက်ကျေနပ်မှု ရရှိဖို့အလွန် ခက်ခဲနိုင်ကြောင်း West Palm Beach, Fla ရှိ American College of Obstetricians and Gynecologists မှ Dr. Maureen Whelihan က ရှင်းပြသွားပါတယ်။
အမျိုးသမီးရဲ့ Clitoris နဲ့ သူ့ရဲ့ဆီးလမ်းကြောင်းဝကြား အကွာအဝေးဟာ ပြီးမြောက်ကျေနပ်မှု ရနိုင်မရနိုင်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်း သုတေသီတွေက ရှင်းလင်းပြောပြထားပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကြာဟာ ပုံမှန်ချစ်တင်းနှောရုံနဲ့ ပြီးမြောက်ကျေနပ်မှု မရရှိစေနိုင်ပါဘူးလို့လည်း Whelihan က ဆိုပါတယ်။
ဟောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ဖျက်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
ဟောက်တယ်ဆိုတာကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး ဆုတ်ယုတ်စေတဲ့ အကျင့်တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ဟောက်တတ်ရင်တော့ ကိုယ့်ကြောင့် အိပ်ရေးပျက်သူတွေကို အားနာရသလို ကိုယ့်အတွက်လည်း လူမုန်းများစေတဲ့ အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ရော ဟောက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လား??? ကိုယ့်ဟောက်သံက ကိုယ်အိပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လောက်ကျယ်လောင်မှန်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မသိရပေမယ့်လည်း တစ်ပါးသူအတွက်တော့ နားဒုက္ခပေးနေမှာ အမှန်ပါပဲ။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဟောက်တတ်တဲ့သူရှိလား???ဟောက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိရင်တော့ အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအကုန်လုံးကတော့ အိပ်ရေးပျက်ပြီး အတော်လေးလည်း ဒေါသထွက်မိမှာပါပဲ။
ဟောက်သံဟာဆိုရင်တော့ ၅၀-၁၀၀ ကြား ဒက်စီဘယ်မှာရှိနိုင်ပြီး အတော်ကိုကျယ်လောင်ပါတယ်။ ဟောက်သံကျယ်တဲ့သူကိုဆိုရင်တော့ “နင်ဟောက်တာ မီးရထားစက်ခေါင်းခုတ်သလိုပဲ” လို့ ပြောမိမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးယုတ်စေတဲ့ ဟောက်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ဖျက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။
၁. အရက်သေစာ လျှော့သောက်ပါ
အရက်သောက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ အရက်သောက်တာကို လျှော့ချဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အရက်သောက်တာနဲ့ ဟောက်တာ ဘာဆိုင်လဲလို့ တွေးမိသူတွေရှိမှာပါ။ အရက်သောက်တာဟာဆိုရင်တော့ လျှာကြွက်သားတွေကို လျော့ကျစေပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ကျဉ်းသွားစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မအိပ်ခင်မှာ အယ်လ်ကိုဟောလ် မမှီဝဲတာက ဟောက်ခြင်းကို လျော့ကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တာက နှာခေါင်းတွင်းက တာဘီနိတ်ကြွက်သားကို ပိုမိုကြီးထွားလာစေပြီး အသက်ရှူရတာကို ပိုခက်ခဲလာစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်တာကလည်း ဟောက်တာနဲ့ ဆက်စပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
စပ်တဲ့ အစားအစာတွေဟာဆိုရင်တော့ အစာအိမ်တွင်း အချဉ်ပေါက်မှုကို မြင့်တက်စေပြီး ဒီလိုအချဉ်ပေါက်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အက်ဆစ်တွေဟာ ဟောက်ခြင်းနဲ့ စပ်ဆိုင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၄. ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ပုံစံအနေအထားနဲ့ အိပ်စက်ပါ
သင့်အနေနဲ့ အဟောက်သန်တာကို ကျောခင်းအိပ်စက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုးဝါးတဲ့အကြံဥာဏ်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဟောက်သန်သူတော်တော်များများကိုလည်း ကျောခင်းမအိပ်စက်ဖို့ ဆရာဝန်တွေက အကြံဥာဏ်ပေးကြပါတယ်။
ကျောခင်းအိပ်တာအကျင့်ပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီကျောဘက်မှာ တင်းနစ်ဘောလုံးလေးတွဲချုပ်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ ကျောကုန်းမသုံးဘဲ အိပ်တတ်တော့မှာပါ။
၅. ဟောက်တဲ့အကြောင်းရင်းကို သိအောင်ပြုလုပ်ပါ
လူအတော်များများက ဟောက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေ မတူကြပါဘူး။ နှာခေါင်း ၊ လည်ချောင်းနဲ့ အာခေါင်ပြဿနာတွေကြောင့် ဟောက်ကြတာများပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်အပိုင်းက ပြဿနာရှိလို့ အခုလို ဟောက်သလဲဆိုတာ သိရအောင်ပြုလုပ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
၆. တစ်သက်လုံးပြန်မဟောက်တော့အောင် ကုသလိုက်ပါ
သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အပိုင်း ပြဿနာရှိလို့ ဟောက်တာလဲဆိုတာသိခဲ့ရရင်တော့ သင့်ရဲ့ ဟောက်တဲ့အကျင့်ဆိုးကိုလည်း ဖျောက်ဖျက်နိုင်ပါပြီ။ လည်ချောင်းကြောင့်ဆိုရင်တော့ သင့်လည်ချောင်းတွင်းမှာ ပိတ်နေတဲ့အရေပြားအပိုပိုင်းကို လေဆာနဲ့ဖြတ်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နှာခေါင်းကြောင့် ဟောက်တာဆိုရင်တော့ နှာခေါင်းထဲက လေလမ်းကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။
နှာခေါင်းထိပ်က အမည်းစက်တွေကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနည်း
မျက်နှာ အဆီပြန်တတ်သူတွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်အသားအရေ (ခေါ်) နဖူးအလယ် နှာခေါင်း၊ မေးစေ့ တွေမှာ အဆီပြန်တတ်သူတွေဟာ အမည်းစက်တွေ ထွက်လေ့ရှိပါတယ်။
အမည်းစက်လို့ ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ဝက်ခြံဖြစ် ပြီး ၄င်းကိုညှစ်လိုက်တဲ့အခါအထဲ က အဖြူရောင်အဆန်လေးတွေ ထွက်လာတာမျိုးပါ။အဲ့လိုအမည်းစက်တွေကိုတော့ နှာခေါင်းထိပ်တစ် ဝိုက်မှာ အများဆုံးတွေ့ရပြီး နှာ ခေါင်းဘေးကပ်လျက်ရှိသော ပါး ပေါ်မှာလဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အောက်နှုတ်ခမ်းနဲ့ နီးကပ်နေသော မေးစေ့ပေါ်မှာတော့ကြာစူးကဲ့သို့ အဖုချွန်းချွန်းလေးတွေ ခပ်ကျဲကျဲ ထွက်ပြီး၎င်းကိုကုတ်ခြစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာလဲ အဖြူရောင်အဆန် ထွက်ရှိလာပါတယ်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာပို၍အဖြစ် များပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က စလို့ ခုလိုမျိုးထွက်လာကြတာပါ။
သာမန်ဝက်ခြံဖုတွေဟာ အချိန်တန် လို့ သူ့အလိုလို မှည့်သွားတဲ့အခါ အဖြူရောင်အဆန် သွေးစသွေးနနဲ့ သားနံရည်တွေထွက်လာပေမယ့်၊ အမည်းစက် တွေကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၄င်း အမည်းစက်တွေကို အထဲကအဆန် ထွက်လာဖို့ညှစ်ပေးရမှာပါ။ တချို့ သူတွေက ညှစ်လိုက်ရင်ပွားတတ် တယ်ဆိုကာ မညှစ်ရဲဘဲထားကြ ပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာတော့ အမည်းစက်တွေကမပွားတတ်ပါ ဘူး။ သို့သော်အမြစ်ပြတ်တယ်လို့ မရှိဘဲ အဆန်တွေထွက်သွားပြီး နောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပင်နေရာဟောင်းမှာသူ့အလိုလိုပြန် ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ အလှကုန်ဈေးကွက်ထဲမှာ နှာ ခေါင်းကပ် (ကပ်ခွာ)ပစ္စည်းလေး တွေ၊ အမည်းစက်အတွက်သီးခြား ဖန်တီးထားတဲ့ scrub (ခေါ်)ဂျီး (ကြေး)တွန်းသန့်စင်ပစ္စည်းလေးတွေ ရနိုင်သလို၊ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ လဲ မျက်နှာပေါ်ကအမည်းစက်တွေကို ဆေးသုံးပြီး ဖယ်ရှားပေးနေ ပါတယ်။
အလှပြင်ဆိုင်ကို တကူး တက သွားနေစရာမလိုဘဲ အိမ်မှာတင်ပဲ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေသုံးပြီး ဘေးဥပါဒ်မဖြစ် စေဘဲအမည်းစက်တွေကိုဖယ်ရှား လို့ရပါတယ်။
သို့သော်သန့်ရှင်းမှု နဲ့အတူ ဇွဲရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဦးစွာညအိပ်ရာဝင်ခါနီး မျက် နှာသစ်ပြီးနောက် အမည်းစက် တွေကို လက်သန့်သန့်ဖြင့်ညှစ် ထုတ်ပါ။(ဝက်ခြံညှစ်ကိရိယာကို သုံးနိုင်သော်လည်း နောင်တစ် ကြိမ်ပြန်သုံးဖို့အတွက် ထိုကိရိယာ ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေပါစေ။)
ပြီးရင် Foaming Cleanser ပါတဲ့ Oil Free (ခေါ်)အဆီပြန်သူတွေ အတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထား သော မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာဖြင့်စင် ကြယ်အောင်ထပ်မံ၍ မျက်နှာ သစ်ပြီးနောက် မိမိအဆင်ပြေရာ အောက်ပါနည်း တစ်ခုခုကိုသုံးပါ။
(၁) ခရမ်းချဉ်သီးကို အလယ် က ထက်ခြမ်းခြမ်း၊ အစေ့ထုတ်၍ ထိုခရမ်းချဉ်သီးအသားနှင့်နှာခေါင်း ထိပ်ကိုပွတ်ပေးပါ။ မိနစ် ၂ဝ ခန့် အကြာမှာ ရေအေးဖြင့်မျက်နှာသစ် ပေးပါ။ (ရေခဲရည်မဟုတ်ပါ။)
(၂) နှာခေါင်းထိပ်ပိုင်း၊ မေးစိ နှင့်နှာတံဘေးမှပါးနှစ်ဖက်ပေါ်သို့ ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်လီ (အနှစ် သား)ဖြင့်လိမ်းပွတ်ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်ခန့်အကြာ မျက်နှာကို ရေအေး ဖြင့် သန့်စင်ပေးပါ။ (ရေခဲရည် မဟုတ်ပါ။)
(၃) နှင်းဆီရည်ဖြင့် မျက်နှာ သစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Rose Water (ခေါ်)နှင်းဆီရည်ကို အလှကုန် ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင် ပါတယ်။
(၄) ဆားရည်မပျစ်မကျဲဖျော် ၍ အမည်းစက်များတွေပေါ်ကို သာလိမ်းပွတ်ပေးပါ။ ၁၅မိနစ်ခန့် အကြာမျက်နှာကို ရေအေးဖြင့်သန့် စင်ပေးပါ။ ဒီနည်းကအရေပြားပေါ် က ဆဲလ်အသေတွေကို ထိရောက် စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။(ရေခဲ ရည်မသုံးရ)
(၅) ပဝါသန့်သန့်ကို ရေနွေး ဖြူစိမ်ကာအရည်ညှစ်၍ထိုအမည်း စက်တွေပေါ် ခေတ္တအုပ်ထားပေး ပါ။ ဒီနည်းကချွေးပေါက်ပွင့်ကျယ် လာပြီးတော့ အမည်းစက်တွေကို အလွယ်တကူညှစ်ထုတ်လို့ရပါ တယ်။ (အရမ်းပူသောရေနွေးကို မဆိုလိုပါ။)
(၆) သံပရာရည်နဲ့ သစ်ကြံပိုး ခေါက်မှုန့်တို့ကို ဆတူရောပြီးည အိပ်ရာဝင်ခါနီး အမည်းစက်တွေ ပေါ်လိမ်းပါ။ တစ်ညလုံးလိမ်း အိပ်ပြီးနောက် နံနက်အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုးဆိုးရွားရွားအမည်းစက် ထွက်သူတွေအနေနဲ့ အလှပြင်ဆိုင် တွေမှာ မကြာခဏ ကြေးချွတ်ခြင်းကို တစ်လတစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Ref : Ideadigezt
မကြာခဏဆိုသလို ခေါင်းကိုက်တတ်ပြီး ဆေးတွေသောက်ပေမယ့်လည်း မသက်သာတာ ကြုံဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ သဘာဝကုထုံးလေးတွေ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးကုထုံးကတော့ ရေသောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးနေတာကို သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ခေါင်းကိုက်တတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရေသောက်တဲ့အခါမှာ ငရုတ်သီးခြောက်မှုန့်အနည်းငယ် ထည့်သောက်ခြင်းဖြင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို သိရှိစေတဲ့ အာရုံကြောတွေကို ပိတ်ဆို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သက်သာစေပါတယ်။ လက်ဖက်စားဇွန်း ရဲ့ တစ်ဝက်ခန့်ကို သောက်မယ့်ရေထဲ ရောမွှေပြီး ရေတစ်စက်လောက်ကို နှာခေါင်းပေါက်ထဲ လောင်းထည့်ပြီး ကျန်ရေကိုတော့ သောက်သုံးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းနည်းနည်းကိုက်လာပြီဆိုရင် ကဖိန်းဓါတ်ပါတဲ့အရာတစ်မျိုးမျိုးကို စသောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဆေးပညာအရ ကဖိန်းဓါတ်ဟာ ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အာရုံကြောတွေ တင်းကြပ်နေတာကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ကော်ဖီသောက်ရုံနဲ့ မသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ ဂျင်းစိမ်းရေနွေးကြမ်းကို စမ်းသောက်ကြည့်ပါ။ ဂျင်းဟာ နာကျင်ယောင်ယမ်းတာတွေကို သက်သာစေပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ ပျို့အန်ခြင်းတွေကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။
Ref : Helloglow
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မီးဖွားခွင့် ကြာကြာရလေ မွေးကင်းစကလေးငယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးပိုကောင်းမွန်လေ
အမျိုးသမီးးတွေ ကုိုယ်ဝန်ဆောင်မီးဖွားခွင့် အချိန်ကြာကြာ ရရှိတဲ့မိခင်တွေရဲ့ ကလေးငယ်က ကျန်ကလေးငယ်တွေထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုပြီးကျန်းမာရေးပိုကောင်းမွန်နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံ ၂၀ကျော်မှာ လေ့လာချက်အသစ်ပြုလုပ်ခြင်းအရ သိရှိရပါတယ်။
McGill University နဲ့ University of California Los Angeles က သုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာချက်အရ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မြင့်မားတဲ့နိုင်ငံတွေသာမက ၀င်ငွေနိမ့်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွင့်အချိန်ကြာကြာပေးတာဟာ ကလေးငယ်တွေအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း သိသိသာသာ တွေ့ရှိရပါသတဲ့။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မီးဖွားခွင့်ပေးတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့နည်းစေတာကြောင့် ကလေးငယ်ကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများတဲ့အပြင် တခြားပြုစုဂရုစိုက်မှုတွေလည်း ပိုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိခင်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့လည်း ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါ မိမိအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပိုမိုပြုလုပ်ဖို့ အချိန်အလုံအလောက်လည်း ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။